Okwangasese, Ukuthula, Ukufihla Okuluhlaza Imizuzu engu-6 ukuya ku-WFU - I-Airbnb
Okwangasese, Ukuthula, Ukufihla Okuluhlaza Imizuzu engu-6 ukuya ku-WFU
I-wifi esheshayo engu-397 Mbps, kanye nendawo yokusebenzela ekamelweni.
Imizuzu nje engu- ukusuka e-Wake Forest, siyilungise ngokuphelele le ndawo ekhethekile kakhulu. Sivame ukuma emafasiteleni amakhulu ale ndawo esezingeni eliphansi futhi sibukele indwangu kamama edlala egcekeni.
Ikhaya lakho elikude nasekhaya litholakala ekupheleni kwe-cal-de-sac esethule kakade ngakho umsindo womgwaqo awubonakali kahle. Ikamelo lakho liyimfihlo ngokuphelele elinendawo yalo yokungena esezingeni eliphansi. Ikhishi lakho linosinki ogcwele, isitofu esishisayo, isiqandisi, nazo zonke izinto zakho zokupheka, izitsha.
Ubhavu omusha onobhavu.
Ikamelo lakho lezivakashi likhulu futhi linamafasitela amakhulu esithombe abuka izihlahla, izinyoni nezinja ezifuywayo, i-Wry Cherry ne-Rose of Sharon. Hlala kuvulande wakho futhi ujabulele ukuthula kwemvelo okukuzungezile.
I-WIFI yethu engu-90 + mbps iyashesha kakhulu. Ungaxhuma ngokuqondile ku-inthanethi ngama-Mbps angu-300+. Uzoba nendawo yakho yedeski eyakhiwe ngomsebenzi wokuthumela nje i-imeyili yomndeni.
I-wifi esheshayo – 397 Mbps
Indawo yangakithi iyingxenye yomndeni ethulile. Kodwa izitolo ezinkulu ezingu-4 zokuthenga ukudla nezindawo zokudlela ezingu-18 okuhlanganisa i-McDonald 's ne-Panera Bread, amabhange, odokotela kanye neziteshi zegesi zingaphansi kwemizuzu engu-5 ukuya kude.
Nazi ezinye izikhathi zokushayela:
Ukudla, Ikhemisi, Igesi, Izitolo Zokudlela, Odokotela, Amabhange imizuzu engu-2 ukuya kude
I-Wake Forest University ikude ngemizuzu engu-6.
Isikhungo Sezokwelapha se-Wake Forest Baptist sisekude ngemizuzu engu-13.
Iya e-Benton Convention Center... imizuzu engu-12
Indawo Yokucubungula... imizuzu engu-16.
I-Piedmont Triad International Airport iyibanga lemizuzu engu-37 uma uhamba ngemoto.
I-Downtown Winston Salem... imizuzu engu-14
Nakuba ikamelo lakho liyimfihlo ngokuphelele futhi lihlukile kulo lonke ikhaya lethu, elinendawo yalo yokungena, indawo yokupaka, ubhavu nekhishi, sikushayela ucingo engxenyeni yethu yendlu. Noma uma uthanda, vele ujikeleze bese ucindezela emnyango wethu.
Nakuba ikamelo lakho liyimfihlo ngokuphelele futhi lihlukile kulo lonke ikhaya lethu, elinendawo yalo yokungena, indawo yokupaka, ubhavu nekhishi, sikushayela ucingo engxenyeni yet…